ဂျာမဏီရဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ သုတေသနခန့်မှန်းချက်ဒေတာကို ဇွန်လ၂၆ရက် ၁၀:၀၀MT အချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပါမည်။ ဂျာမဏိနိုင်ငံသည် ယူရိုဇုန်ထဲတွင်စီးပွားရေးအင်အား အကောင်းဆုံးသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သောကြာင့် ထိုဒေတာသည် ယူရိုငွေကြေးအပေါ်သက်ရောက်မှုပြင်းပါသည်. ဒေတာကိန်းဂဏန်းများကောင်းမွန်ပါက စီးပွားရေးအခြေအနေကျတက်လာတယ်လို့မှတ်ယူရမှာဖြစ်ပြီး ကိန်းဂဏန်းများကျဆင်းသွားပါက စီးပွားရေးအခြေအနေကျဆင်းသွားတယ်လို့မှတ်ယူရမှာဖြစ်ပါသည်။.
နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ စာရင်းဇယားတွေအရ ဂျာမဏီစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအခြေအနေသည် 114.6အထိကောင်းမွန်ခဲ့ပါသည်။ ယခုတကြိမ်မှာလဲ ဒေတာကိန်းဂဏန်းများအားကောင်းပါက ယူရိုငွေကြေးတန်ဖိုးမြင့်တက်နိုင်ပါသည်။.